पारिश्रमिक लिएपनि प्रियंका, दीपिका र विल्सन फिल्मको प्रचारमा आएनन् - निर्देशक बोहोरा
काठमाडौं । फिल्मी निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहोराले आफूलाई कलाकारहरूले दुःख दिएको बताएका छन् । ‘मेरो फिल्मका केही कलाकारहरूले समयभन्दा अगाडि नै विभिन्न समस्या देखाएर पैसा लगे । तर, प्रचारप्रसारमा नआएर समस्या भयो,’ निर्देशक बोहोराले भने । उनी निर्देशित फिल्म ‘हेल्लो जिन्दगी’मा समावेश गीत ’अनौठो प्रेम’को सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाकै क्रममा उनले दुखेसो पोखेका हुन् ।
‘आफ्नो फिल्मलाई प्रमोसन गर्न कलाकार आफैँ आउनु पर्ने हो । तर, पारिश्रमिक पाएपछि सम्पर्कविहीन छन्,’ उनले भने । बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि प्रियंका कार्की, दीपिका प्रसाईं र विल्सन विक्रम राई फिल्मको प्रचारप्रसारमा नआएको र विभिन्न बहाना बनाएको निर्देशक बोहोराको आरोप छ ।
‘राम्रा कलाकार नभएका होइनन् तर केही अनप्रोफेसनल कलाकार पनि छन्,’ उनले भने । निर्देशक बोहोराले कलाकारहरूलाई बारम्बार म्यासेज र फोन गरेर सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको बताए । ’प्रियकाजी बच्चा भएको कारण नआउनु भएको हो कि ? दीपिकाजीलाई पनि सम्पर्क गर्दा विभिन्न बहाना बनाउनु भएको छ,’ उनले भने । दीपिकाजीको श्रीमान दिवाकर भट्टराई आफै निर्देशक भए पनि फिल्म निर्देशकको पीडा नबुझेको उनको गुनासो छ ।
‘दिवाकरजीले मेरो पीडा बुझ्नु पर्ने हो, तर बुझेनन् । फिल्म रिलिजको संघारमा रहँदा कलाकार पब्लिसिटीमा नआउँदा के हुन्छ ? त्यो कसरी व्यक्त गरौँ,’ निर्देशक बोहोराले भने ।
उनले आफुले पूरा पारिश्रमिक दिएकै कारण कलाकारको साथ नपाएको गुनासो गर्दै आउने फिल्ममा स–सर्त पब्लिसिटीको पाटो सम्झौतामा समेट्ने बताए । १८ चैतबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्ममा ‘मर्डर मिस्ट्री’सँगै बदला र मित्रताको कथा देखाइएको छ । फिल्मको बारेमा बोल्दै अभिनेता जोशीले यसमा फरक कथा देख्न पाउने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्मात्री सृजना जोशीले फिल्म निर्माणमा कुनै सम्झौता नगरिएको बताइन् । ‘हामीले राम्रो फिल्म बनाउन कुनै सम्झौता गरेनौं । तर, एक्ट्रेसबाट हामीले सहयोग पाएनौं । हामी नेपाली फिल्मको स्तरीयता बढाउन आएका हौँ,’ उनले भनिन् ।
फिल्ममा सेन्ट्रल क्यारेक्टरमा विक्रम जोशी छन् । बिक्कीको उपनामले समेत परिचित विक्रमले अभिनयमा ह्याप्पी डेजमार्फत डेब्यु गरेका थिए । त्रिकोणत्मक प्रेम कथा रहेको फिल्ममा विक्रमसँगै दीपिका प्रसाईं र प्रियंका कार्कीको पनि अभिनय छ ।
नेपाल र बेलायतको रमणीय दृश्यमा छायांकन गरिएको फिल्मलाई एभरेष्ट सूर्य बोहराले निर्देशन गरेका छन् । फिल्ममा विल्सन बिक्रम राई, बिक्रान्त बस्नेत, सविता गुरुङ, ध्रुव दत्तलगायतका कलाकारको अभिनय छ । हिराल जोशी र बिक्रम जोशी निर्मातामा रहेको फिल्ममा सृजना जोशी महर्जन कार्यकारी निर्माता रहेकी छिन् ।
निर्देशक बोहरा र बिक्रम जोशीको कथा रहेको फिल्ममा निर्देशक बोहरा र अभिमन्यु निरवीको पटकथासँगै सम्वादमा रहेको छ । फिल्ममा राजनराज शिवाकोटी र एलिस कार्कीको संगीत छ भने प्रमोद खरेल, प्रताप दास, प्रविशा अधिकारी, एड्रिन प्रधान र रजिना रिमालको पाश्र्वगायन छ । यसमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, सम्राट बस्नेतको द्वन्द्व निर्देशन र मित्र डि. गुरुङको सम्पादन छ ।
बैंकमा पैसा राख्नेमा कुन जिल्लाका नागरिक अघि ? २ मिनेट पहिले
भारतीय दूतावासभित्र सुरक्षाकर्मीले आफैँलाई गोली हानी गरे आत्महत्या ८ मिनेट पहिले
ट्रमा सेन्टरमा २४ घण्टा विशेषज्ञ सेवा १४ मिनेट पहिले